Somaliska - Byggnads akassa
Om a-kassan på somaliska
A-kassan ayaa jira, si aad u noqoto shaqaale badbaado leh haddii aad shaqo la'aan noqoto. Ururka Shaqaalaha Iskaashatada ee Iswidhan a-kassa ayaa kuu jooga haddii aad ka shaqeysid warshadaha dhismaha iyo rinjiyaynta.
Xubinnimada labadaba maal-gelinta shaqa la'aanta iyo ururka ku siinaya amniga ugu fiican ee adiga shaqaale ahaan.
Buuxi codsiga xubinnimada ee byggnadsakassa.se. Gal adigoo isticmaalaya Sharciga Bankigaada Haddii aadan haysan aqoonsiga bankiga, kaliya buuxi foomka codsiga oo u soo dir guriga si aad u saxiixdo. Xusuuso inaad dib noogu soo celiso markii aad saxiixday.
Noqoshada xubin ka mid ah maal-gelinta shaqo la'aanta aan ahayn kharash badan. Waxaad ka heli kartaa khidmadda xubinnimada ee laga heli karo byggnadsakassa.se. Habka ugu fudud ee lagu bixin karo waa kaliya lacagta tooska ah. Hagaaji tan isla markiiba ka dib markaad dalabkaaga noo soo gudbiso. Waxaad taas ku sameyneysaa byggnadsakassa.se/autogiro.
Si aad u hesho mag-dhaw ku saleysan mushaharkaagii hore, waa inaad xubin ka ahayd ugu yaraan laba iyo toban bilood oo aad buuxisay shuruudaha aasaasiga ah iyo xaaladaha shaqada inta lagu jiro xubinimadaada. Waxaad heli kartaa ilaa 80% mushaarkaagii hore ilaa ugu badnaan 1 200 karoon maalintii 100-kii maalmood ee hore. Muddadan ka dib, magdhawga ayaa la dhimayaa ugu badnaan 1 000 karoon maalintii.
Haddii aanad xubin ka ahaanin 12 bilood, hase yeeshee haddii aanad buuxin shuruudaha xaq u lahaanshaha magdhowga, waxaad heli kartaa magdhowga aasaasiga ah. Waxaad helaysaa ugu badnaan 510 karoon maalintii.
Xaaladaha shaqadu waxay ka dhigan yihiin in labadii bilood ee ugu dambeeyay aad shaqeysay ugu yaraan 60 saacadood bishii halkii ugu yaraan lix bilood ama aad shaqeysay ugu yaraan 420 saacadood gudahood lix bilood oo isku xiga. Majirto bil ay kujiri karto wax ka yar 40 saacadood oo la shaqeyay.